Tababaraha Manchester City Pep Guardiola: "Waxaan Nahay Halyeeyo"
HomeWararka CiyaarahaTababaraha Manchester City Pep Guardiola: “Waxaan nahay halyeeyo”
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa kooxdiisa ku tilmaamay “halyeeyo” ka dib markii ay xajisteen horyaalka Premier League ayna 3-2 kaga badiyeen gurigooda Aston Villa Axadii.
Citizens ayaa 2-0 ku hogaamineysay rubuci ugu dambeeyay hal saac oo ka dhacday garoonka Etihad Stadium, laakiin labo gool oo uu dhaliyay Ilkay Gundogan oo bedel ku soo galay ciyaarta , labada dhinacba waxaa u dhaliyay Rodri shan daqiiqo gudaheed, taasoo ka caawisay inay hogaanka ciyaarta u rogaan guul. koobkoodii afaraad ee Premier League shan xilli ciyaareed gudahood.
Isagoo la hadlayay mancity.com ka dib markii uu kor u qaaday koobka Premier League, Guardiola ayaa yiri: “Waxaan nahay halyeeyo, marka aad afar ka mid ah ku guuleysato shanta markaas waxaa sabab u ah nimankan kuwa gaarka ah, waa nala xasuusan doonaa.
Waxaan ku guuleysanay 100 dhibcood, kaalinta labaad ee Brighton, ku guuleysiga gurigeena dadkeena ayaa ah midka ugu fiican.”
Isbaanishka ayaa hadalkiisa ku daray: “Kulankii ugu dambeeyay mar walba waa mid gaar ah, shucuur badan, waqtigii aan dhalinay goolka wax walba ayay badashay.
“Waxaan u sheegay inay tahay wax iska caadi ah, laakiin waa inaad xakameysaan, Oleksandr Zinchenko wax badan ayuu na siiyay qeybtii labaad, waxaan dhalinay goolka, waxaana helnay dardar, taageerayaasheenna ayaa sameeyay intii kale.”
Guadiola ayaa sidoo kale amaanay dadaalka kooxda horyaalka ku xifaaltama ee Liverpool , isagoo yiri: “Weligay ma arkin koox sida Liverpool oo kale ah nolosheyda, waan ogahay inay adag tahay, laakiin waxay naga caawiyeen inaan noqono koox ka fiican xilli ciyaareedka.
“Waxaan dooneynaa inaan guuleysano, waxaan dareemayaa dareenka ah in kooxaha xafiiltama ay yihiin kuwa adag, waxayna noqon doonaan kuwa aad u adag xilli ciyaareedka soo socda.
“Maanta ma haysto tamar aan kaga fikiro xilli ciyaareedka soo socda, waxaan nahay horyaal mar kale! Waxaan difaaci doonaa taajkeena mar kale iyo mar kale.”
City ayaa ku dhameysatay xilli ciyaareedka 2021-22 hogaanka horyaalka iyagoo leh 93 dhibcood, kaliya hal dhibic ayey ka sareeyaan Liverpool oo ku jirta kaalinta labaad, taasoo 3-1 kaga badisay Wolverhampton Wanderers garoonkeeda Anfield.